NY RADO RAFALIMANANA FANAMBARANA 22/11/2013
Nivoaka androany ny valim-pifidianana fihodinana voalohany. Masina ny safidy izay natao tamin’ny 25 oktobra 2013 ka tokony hajain’ny rehetra. Ny safidin’ny maro an’isa mira feon’ny vahoaka.
Naneho ny Malagasy fa mangetaheta fiovana sy fahalalahana ary maniry fampandrosoana eo amin’ny tontolo misy azy ireo. Mangataka fanjakana tan-dalàna mametraka vahoaka sambatra am-po sy sambatra ara-batana ary ara-panahy ihany koa ny fahatongavan’ny mpifidy maro tamin’iny fotoana iny.
Hiatrika ny fihodinana faharoa isika amin’ny 20 desambra izao ka hanendry izay ho filohan’ny Repoblika Malagasy ho amin’ny dimy taona ho avy. Filoha hanatanteraka ny safidy sy ny fanirian’ny Malagasy. Filoha hitondra fitoniana, Filoha hametraka fampihavanana sy ny soatoavina Malagasy. Filoha hanova ny ratsy sy ny tsy nety ka hitondra ny firenenana ho any amin’ny tsara.
Ny kandidà Dokotera Jean Louis Robinson no tsapako fa hitondra fanafody ho an’ity Tanindrazana iombonanantsika ity. ny kandidà Dokotera Jean Louis Robinson no hitako fa afaka hanatanteraka ny hetahetan’ny Malagasy izay notanisaiko tetsy ambony.
Hitondra ny anjara-birikiko aho eo amin ny lafiny ara-toe-karena indrindra fa ny fiarahana amin’ireo mpiara-dia amiko eo amin ny sehatra iraisam-pirenena. Hotontosaina amin’ izany ireo “Plan Marshall”.
Ny foto- kevitra nijoroan’ny NY FANAHY MAHA OLONA hatramin’izay ary amin’ny ho avy dia ny hoe: ”MILA HAVADIKA NY PEJY” ary i Madagasikara no tokony hotompoina miaraka amin’ireo vahoaka 22 tapitrisa mpiray tanindrazana.
NY FANAHY MAHA OLONA, NY HERY TSY MAHALEO NY FANAHY
Antananarivo, 22 Novambra 2013